Tato anatin’ny tapa-bolana no nitrangan’izany. Araka ny filazan’ny mponina avy any Antohobe hatrany Andriantany, mampiasa fonoka ireo olon-dratsy manao latsak’alina. Ny lakozia any ambany rihana sy ireo fitaovana ary biby fiompy tahaka ny akoho amam-borona no lasibatra.
Manatanteraka andrimasom-pokonolona ihany ireo mponina fa tsy mahandry marain’andro ka vao mody ireo vatan-dehilahy dia manao tapody fohy ireo mpanao hala-botry. Araka ny voalazan’ny manodidina hatrany, misy misopatra ihany koa ireo voly eny an-tsaha. Eo am-pamokarana voly avotra toy ny karazan’anana sy fangaron-daoka mantsy amin’izao ny tantsaha. Ankoatra izay, maro amin’ireo voankazo ihany koa no misy mitango. Efa manatanteraka ny vela-pandrika ireo manampahefana any an-toerana sy ny mpitandro filaminana.